Wana zvakawanda needu Ekutengesa Marobhoti | Robot Kutengesa
pamusoro pegore rimwe (AR)
anopfuura makore mana (AR)
pamusoro pegore rimwe (SR)
anopfuura makore mana (SR)
Wana zvakawanda needu Ekutengesa Ekurobhoti
Ungade here kuwana wakasununguka usingawani mari uye / kana kusiyanisa mari dzako, kunze kwayo kuri kupedza nguva, pasina kumanikidzwa kwepfungwa, uye kunyangwe pasina ruzivo rwemusika wemasheya kana chirongwa?
Vanos Kutengesa marobhoti mirira mhinduro yakanaka, zvitongere wega:
Mharidzo yemabhoti edu ekutengesa
YouTube chinongedzo - cliquer ici - kuitira kuti iwe ugone kuisa musoro wenyaya mumutauro wako muvhidhiyo - kuita sei? -
Vhidhiyo script Mharidzo yemarobhoti edu ekutengesa
Wakaneta nekugamuchira kufarira kushoma?
Iwe unoda kubatsirwa kubva pamusika wemasheya, asi iwe hauna ruzivo rwakakosha kana iwe hauna nguva yekuzvichengeta? Pamwe unotya kubonderana uye nerombo rakaipa kudyara kana pamwe iwe unoda kusiyanisa mari dzako?
Iva nechokwadi: isu tine mhinduro yako!
Waizviziva here kuti zvinokwanisika kufungidzira pamusika wemasheya, pasina kuita chero chinhu, pasina ruzivo rwakakosha uye kuunza mari yakanaka?
Kwete haisi kurota, kana chitsotsi, asi mhinduro!
Sei? 'Kana' Chii? Kutenda kuma algorithms atakagadzira uye ayo anotarisisa CAC kana DAX kuti titenge nekutengesa otomatiki, pasina kupindira kwevanhu.
Ndiyo yakanakisa kudyara kwe ita kuti mari yako ikure!
Iyo 1-gore rekuita peji inokupa iwe chaiyo ruzivo.
Kufarira? Kurumidza, nekuti injini dzedu dzinotengeswa muhuwandu hushoma pamitengo iri kupihwa parizvino
Mashandiro anoita marobhoti edu ekutengesa
YouTube chinongedzo - cliquer ici - kuitira kuti iwe ugone kuisa musoro wenyaya mumutauro wako muvhidhiyo - kuita sei? -.
Kubatana: Ma algorithms edu akanyorwa nekodhi module ProOrder yepachikuva ProRealTime, kuburikidza neBank IG Bank.
Cherechedza: Isu hatina kubatana neProRealTime uye / kana IG Bank uye hatigamuchire chero komisheni kubva kwavari.
CAC: France 40 Cash (€ 1) - CAC - Index yemakumi mana emamiriri eFrance emusika.
CFD: CFD chigadzirwa chinogadzirwa chinoita kuti zvive nyore uye zvisingadhuri kufungidzira pane zvakasiyana zvemari zviridzwa.
DAX: Germany 30 Cash (€ 1) - DAX - Indekisi yemakumi matatu anomiririra masheya eGerman pamusika.
Manheru: Kana chinzvimbo chikaitwa panopera chikamu (kazhinji 23:00 pm) husiku husiku mari yekubhadharisa mari inogona kuiswa zvichibva pahuwandu hwechigaro.
Vhidhiyo script Mashandiro edu ekutengesa marobhoti
Ma algorithms edu akanyorwa neProOrder module yeProRealTime software, kuburikidza neBanque IG Bank. Ivo vanotenga nekutengesa zvakakwana otomatiki.
Injini dzedu dziri kuongorora musika CAC kana DAX uye voita sarudzo dzavo zvine mutsindo, vachitevera chaizvo hurongwa hwakagadzwa.
Iwe haudi chero ruzivo pamusika wemasheya kana muzvirongwa uye mainjini edu achange achishanda kunyangwe komputa yako ikadzimwa.
Zvakanakira injini dzedu
Kufungidzira pamusika wemasheya tichishandisa edu algorithms inomiririra kugamuchirwa kusiyaniswa kana iwe wakaneta nekugamuchira zvishoma mubereko.
Mafungiro ezvepfungwa anowanzoita basa hunyengeri hwakaipisisa kune vanofungidzira. Neinjini dzedu, njodzi iyi haipo.
Zvese zvinzvimbo zvakatorwa zvakavharwa musi iwoyo kuitira kuti kwete kubhadhara husiku mari yekubhadhara mari.
Izvi zvakare zvinodzivirira chero mukaha ungangoitika panguva yehusiku kana pakupera kwevhiki.
Kutenda kune zvakanakira maCFD zviri nyore kuwana mari yakawanda. Tinokuratidza kuti sei papeji Kuhwina +.
Kana mamwe mamiriro akasangana, robhoti inoisa yekutenga-pfupi kana kutengesa pfupi. kupokana nekwaitiswa kweakanyanya maitiro.
Iri zano rinoshanda kwazvo, nekuti misika yemasheya dungwerungwe nguva zhinji.
Vatengesi vanoshandisa chimiro chinotevera nzira vanofanirwa kutora kurasikirwa kudiki kudiki vasati vawana purofiti hombe. Iyi nzira, iyo inoshandawo kwazvo, ine mukana wekuda kudzikama kwakawanda.
Marobhoti edu ekutengesa akashongedzerwa ne Tora Profit (kumusoro) uye a Stop Loss (pasi) kuvhara mabasa. Kunyangwe pasi pemamwe mamiriro ezvinhu aya achavharwa nekukurumidza.
Ivo vari kushingaira panguva yenguva yekuvhura kwemaawa emusika wekutengesa, kubva na9: 00 mangwanani kusvika na17: 30 masikati. Yakanga iri panguva iyi iyo iyo spread ndiyo yakachipa uye iyo kusagadzikana ndiko kwakanyanya.
Injini dzedu dzekutengesa dzinovakirwa pa makenduru pamaminitsi makumi matatu. Izvo hazvina chekuita nezve yakakwira frequency kutengesa iyo, yechikamu chayo, inogadzirisa zviuru zvemabasa pamasekondi, uye iyo yakachengeterwa makambani akasarudzika ayo anofanirwa kukwanisa kutengesa nemari zhinji kwazvo. Ndidzo these marobhoti ane muchina wakashata, uye nechikonzero chakanaka, nekuti ivo vanowanzo shandura zvisiri izvo mutengo wemidziyo yezvemari yavanotengesa kuti vawane mari kubva kwavari.
Tsanangudzo pane edu algorithms
Injini dzedu dzekutengesa dzinoshandisa iyo Supertrend> chiratidzo uye a Kufamba avhareji kuti uone kutungamira kwetsika huru.
Ivo vanoshandisa Bollinger Bhendi uye iyo Stochastic Oscillator kuona mamiriro ekuchinja.
Ivo vanowedzera iyo ADX uye ADXR kuyera simba reiyo maitiro.
Ivo vanonongedzera kuzviratidzo zvakasiyana siyana kusefa mabasa anogona kuve nenjodzi.
Ivo vanoshandisa zvimwe Zviratidziro kumisa kutengeserana kare zvisati zvaenderana nemutengo wemitengo.
Ivo dzimwe nguva vanoita trailing Stop Loss.
Marobhoti edu ese akashongedzerwa neTora Profit (yakakwira) uye Stop Loss (yakaderera).
Ndezvipi izvi Zviratidziro zvehunyanzvi zvinoshandiswa?
ADX et ADXR : vanoyera kugona kutamisa mutengo kunze kwekusiyana kwenguva yapfuura.
Bollinger mabhendi : anoshandiswa kuratidza akanyanya kuwanda uye kuwanda mazinga. Dzinoratidza kana musika wacho wakadzikama kana kuti usina kugadzikana.
Kufamba avhareji : ivo vanoratidza iyo yepakati kukosha kwemutengo pane yakapihwa nguva. Ivo vane mhedzisiro yekutsvedza mitengo.
Stochastic : iri oscillator iyo inoratidza nzvimbo dzekutenga-pamusoro uye kutengesa-pamusoro.
Supertrend : inofamba pamusoro kana pasi pemitengo zvichienderana nemaitiro. Inonyatso kusefa mafambiro madiki eiyo kosi.
ROBOTI KUDZIDZA MAVHIDZO
Yedu yekutengesa marobhoti mukuita
Indices uye Mari manejimendi
Mari manejimendi uye Mishumo
Vatengesi neRobot Trading
Algorithmic Kutengesa Grand-rue 10 CH-2054 Chézard-St-Martin
Copyright © 2020 - Robot-trading.io Kodzero dzose dzakachengetedzwa